Isitayile seZombie sisebenza kwakhona ngeAdobe Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Isitayile sokuphinda ubambe ifoto zombi kunye neAdobe Photoshop ukwenza imbonakalo zombi kwezethu Iifoto zoku IHallowen. Fumana ukutshintsha imbonakalo yemifanekiso yakho ngale nto inomdla efuna ukwenza into elula kodwa itsala amehlo kwaye inomdla usebenzisa inkqubo ye-quintessential ye-retouching yefoto.
Fumana a ubugcisa obugqibeleleyo bedijithali Zonke iifoto zakho zoku IHallowen ukufumana imifanekiso yoyilo kunye nomtsalane ngakumbi ngokukhawuleza nangokulula. Kule isikhundla Uya kufunda iikhonsepthi ezibalulekileyo ze Ukuphinda ubambe ifoto kwakhona nge Photoshop.
IHallowen iyeza kwaye sonke sifuna ukuba nayo Iifoto ezoyikisa kakhulu ke kuya kuba kuhle ukufunda indlela yokwenza i-retouch yefoto enesitayile zombi ukubuyisa yonke imifanekiso yethu yoku IHallowen.
Siza kufunda ukusebenzisa ezi zixhobo zilandelayo Ifotohop:
uhlengahlengiso lomaleko (ubukhulu, amagophe, umbala olinganayo)
Icebo lokucoca ulwelo (ukhetho)
Siza kusebenzisa oku kulandelayo iinkqubo:
Nciphisa ithoni yonyawo lwakhol (mhlambe)
Yenza izangqa ezimnyama
Guqula umbala ukusuka kumfanekiso
1 Vula umfanekiso kwi-Photoshop
2 Mhlophe ulusu
3 Yenza izangqa ezimnyama
4 Guqula umbala womfanekiso
Vula umfanekiso kwi Photoshop
Into yokuqala ekufuneka siyenzile khangela umfanekiso esifuna ukusebenza ngayo kwaye siyivule Photoshop. Nje ukuba kuvulwe kwinkqubo Siza kuphinda kabini ulwahlulo oluphambili Ukuba nekopi kwaye ungaphindi ubambe ifoto yoqobo, ukwenza iikopi zomaleko kufuneka usinike iqhosha lasekunene le mouse kwaye ucinezele ukuphinda-phinda umaleko.
ukuba mhlophe ulusu Kwifoto yethu into yokuqala ekufuneka siyenzile kukwenza uhlengahlengiso lobungakanani, Uluhlu lohlengahlengiso luyasivumela desaturate umbala yomfanekiso ufumana ithoni ekhanyayo engwevu. Xa senza olu luhlu kufuneka sicinezele control + i indlela emfutshane ukwazi umaleko ojikelezayo kwaye usebenzise isiphumo kuphela kwiindawo apho sipeyinta khona ngebrashi.
Sebenzisa i uhlengahlengiso lolungelelwaniso Kulula kakhulu kufuneka siyicinge nje loo nto Yibrashi eqhelekileyo ye PhotoshopNjengoko ibrashi nganye inoluhlu lweenketho ezenza ukuba nzima ngakumbi okanye kancinci, kuxhomekeke kwinto esiyifunayo, siya kutshintsha iiparameter ngendlela esithanda ngayo.
Sikhetha ibrashi emva kokucofa umaleko wohlengahlengiso kunye nolawulo lweendlela ezimfutshane + i kunye saqala ukupeyinta kwezo ndawo apho sifuna ukuthoba ulusu. Into eqhelekileyo kukuba a zombi unesikhumba esimhlophe ngokubanzi kodwa oku kukhululekile kwaphela kuxhomekeke kwinto umntu ngamnye ayijongayo kwaye ayifunayo.
Iiparameter ezithi kufuneka siguqule kancinane xa usebenzisa esi sixhobo zezi zilandelayo:
Ukukhanya: ivumela ukusebenza kwebrashi ukuba kubonakale ngakumbi okanye kungabonakali
Ukuhamba: ubungakanani bala oza kuphuma kwibrashi
Ubungakanani: ubungakanani bebrashi
Ukuqina: yenza umda webala ngakumbi okanye unciphise
Kule meko siza kusebenzisa ibrashi ngobulukhuni obuncinci ukwenza isiphumo sithambe, ukufezekisa ubunyani obukhulu.
Into elandelayo esiza kuyenza yile yenza izangqa ezimnyama emfanekisweni ukunika imbonakalo yokwenyani kumfanekiso wethu. Ukwenza esi siphumo siza kwenza ifayile ye- Uluhlu lohlengahlengiso lwejika kwaye siza kubeka imo yomaleko iphindaphindwe, kamva sicinezela control + i indlela emfutshane ukufezekisa ukuba isiphumo sisetyenziswa kuphela kwiindawo esizifunayo.
Kancinci kancinci ngoncedo lwebrashi sipenda indawo yamehlo ke ukufezekisa umphumo wezangqa ezimnyama esizijongileyo. Umbono walempembelelo kukuba uthambile ngoko ke kungcono ukusebenzisa indlela ye- Xubha nge-opacity kunye nobunzima obuphantsi ukufaka ngokuthe ngcembe isiphumo. Ukuba sifuna umphumo wethu ubonakale ngakumbi, into esinokuyenza kukudala olunye uhlengahlengiso lweejika kwaye siphinde sisebenzise isiphumo kwakhona.
Sinokwenza umaleko wohlengahlengiso lweejika kwaye sitshintshe amaxabiso omfanekiso ngendlela ngokubanzi yokufezekisa Thelekisa lo mfanekiso ngaphezulu kwaye ndinike ukujonga zombi ngokwenyani.
Siphantse saba nefoto yethu yokufota zombi sinako kuphela tshintsha umbala womfanekiso ukukunika ithoni emnyama kwaye inxulumene nolu hlobo lokufota. Eli candelo lisimahla ngokuxhomekeke kwinto elindelwe nganye nganye, kule meko siza kuyinika umfanekiso ithoni eluhlaza kodwa unokukhetha enye ithoni.
Sakha i ulungelelwaniso lolungelelwaniso lombala kwaye siqala ukutshintsha amaxabiso omfanekiso de sifike kwithoni ebesiyifuna, emfanekisweni sinokubona ithoni ngqo esetyenziswe kule meko.
IPodemos ubuso obhityileyo kancinci okanye ukuqaqambisa uncumo fumana umfanekiso othusayo usebenzisa icebo lokucoca ulwelo Photoshop. Ukuba ufuna ukufunda ukusebenzisa esi sixhobo ungabona oku enye post.
Sele siyazi indlela yokufaka ifoto kwakhona ukuze sifumane isitayela zombi Inomdla kule nto IHallowen. Khumbula ukuba zonke izixhobo esizisebenzisileyo zinokuba luncedo kwezinye iintlobo ze ukufota kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Isitayile seZombie sokuphinda ubambe umfanekiso kunye neAdobe Photoshop